Nsogbu na LG G4: ihuenyo mmetụ anaghị aza dị ka o kwesiri | Gam akporosis
Nsogbu na LG G4: ihuenyo mmetụ anaghị aza dị ka o kwesiri
Cristina Torres ebe a oyiyi | | LG
Ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ anyị nwere ike na-eche banyere zụta LG G4. N'ezie, n'ime nhọrọ ndị dị ugbu a na njedebe dị elu, ọ dị ka otu n'ime ihe kachasị adọrọ mmasị, ma maka ọrụ dịnụ na maka ọnụahịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ihe niile yiri ka ọ na-egosi na LG amapụla nsogbu ahụ Sony tara ahụhụ na Samsung kwuru na ọ ga-ekpo oke ọkụ nke isi mgbawa, ugbu a enwere obi abụọ na teknụzụ nwere ike ime ka ị chegharịa ịzụta. N'ihe banyere ụdị LG G4, ọ nweghị ihe dị njọ na isi, mana ihe dị na ihuenyo mmetụ anaghị aga nke ọma ka ha kwesiri.
Ọzọ anyị ga-egosi gị ụfọdụ vidiyo nke gosipụtara nsogbu mmeghachi omume nke LG G4 ihuenyo, nke nwere ike ịnwe ihe ngwọta dị mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ekwughị banyere okwu a, site na mkpesa nke ndị ọrụ ahụ n'onwe ha, enwere ike iche na ọ bụ ọdịda metụtara ngwaike ahụ n'onwe ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na i nweela otu n'ime ekwentị ndị a, ma ịchọrọ ijide n'aka na ihe nlereanya gị anaghị enye nsogbu, anyị ga-egosikwa gị usoro ị ga-eso iji nwalee ihuenyo mmetụ gị.
N'ọtụtụ forums nke ndị mmepe XDA gosipụtara nsogbu na Nzaghachi ihu igwe kpatara LG G4. Na vidiyo ndị na-esonụ ị ga-ahụ ihe mere ụfọdụ ndị ọrụ na njikwa ọhụrụ ahụ. Maka ugbu a, anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ kpọọ onwe ya, mana ọ dị ka o doro anya na nsogbu bụ n'ihi ngwaike nke ekwentị. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ ahụwo otú e si emeghachi ya ọbụna na-enweghị iji ihe nchebe ihuenyo. Ihe kachasị mma bụ na ị na-elele vidiyo ndị na-esonụ ma chọpụta nkwubi okwu gị.
Olee otú nwalee ihuenyo mmetụ nke LG G4 m?
Ọ bụrụ na oge n'ime gị LG G4 ọnụ Dete chọpụtabeghị nke ọ bụla n'ime njehie ndị a, mana ị na-atụ egwu na ọ ga-eme gị n'ọdịnihu ma ịchọrọ izere ha site na ịlaghachi na ọdụ gị, tupu ịmalite ọsọ, ị kwesịrị ilele usoro anyị na-atụ aro. n'okpuru. N'okwu a, ị ga-ahụ ohere iji nwalee ihuenyo gị wee hụ ma ọ bụrụ n'ezie na mpaghara mmetụ aka na-anaghị aza. Emechaa, i nwere ike ịtụgharị uche n’ihe ị ga - eme n’isiokwu a:
Pịa usoro 277634 # * # na ọnụ iji nweta ọrụ menu.
Pịa na Nnwale Ngwaọrụ -> Nchịkọta Ọrụ - Nnwale Ntugharị -> Nyochaa Ntinye Aka - Akwụkwọ ntuziaka.
Kpoo mpaghara ule niile ị na-eme na mgbata / swipe ma kụọ aka ruo mgbe ọ jupụtara, wee si otú a nyochaa mmetụ ndị na-edeghị aha.
O doro anya na, nsogbu na LG G4 ihuenyo mmetụ a na-edebanye aha ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na mmegharị na mmegharị ụfọdụ. N'ihi ya, n'ihe banyere swipe, mkpesa na-adịkarị. Nwere ike ịchọpụtaghị ya tupu oge a, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ njedebe na-ezighi ezi nke mkpesa a sitere. Maka ugbu a, ruo mgbe LG kwupụtara nkwupụta, o siri ike iru nkwubi okwu. Ma ka ọ dịgodị, ị nwere ike izere nsogbu n’ọdịnihu. Ma mgbe ịmechara, ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịkekọrịta nsonaazụ anyị na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Nsogbu na LG G4: ihuenyo mmetụ anaghị aza dị ka o kwesiri
Iphone adighi enye nsogbu hehehe
M na m nwere g3 na nsogbu ndị m nwere na lg ọrụ ọrụ ihe karịrị ọnwa atọ iji weghachite ekwentị na-enweghị idozi akwụkwọ ikike na ngọpụ maka ngwụcha ọ nwere na ọ gbawara na ihuenyo egbochi n'ihi na ọ naghị eju M na m na-akwa ụta n'ihi na m na-amasị imewe na ụfọdụ ọrụ ma na mgbe-ahịa ọrụ na ọgwụgwọ natara nnọọ doro anya, m ga-enwe ya ịzụta ihe a ika
Ikuku Ngwakọta? Ọ BR na ọ dị ezigbo njọ ịza mkpụrụ osisi apụl
Emeela m ule ahụ, mana tupu m mee ya achọpụtara m na oge ụfọdụ ụfọdụ mmetụ ahụ anaghị achọpụta ya mana ọ bụghị etu ha siri tinye ya ebe a. Ọ bụ nnọọ aka n’oge. ihe m na-achọghị nsogbu n'ọdịnihu. Na-akwado ịgbanwe ya?
M laghachiri nke m. Pịa ugboro abụọ n’etiti ihuenyo adịghị m mma. N'elu ụfọdụ ha nwere ntụpọ ụfọdụ. Gbanyụọ ka anyị gaa !!!
Na nwunye m enweghị nsogbu ... MOBILE PLANE!
Zaghachi José Manuel
Enwere m nsogbu a kapịrị ọnụ na okwu a mana karịa ihe niile ọ na-ekpo ọkụ nke na enweghị m ike iburu ya n'akpa m. Ọ bụ nke abụọ m nwere. Amaghị m ma m ga-agbanwe ya ọzọ.
Enwere m nsogbu na lg g4me azụrụ m ya 2 ụbọchị gara aga ma ugbu a ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, gbanyụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ niile mana ọ na-aga n'ihu na mgbe m wedara ogwe ọrụ ma ọ bụ na m edozi ya ngwa ngwa ọ malitegharia.
Otu ụbọchị m malitegharia dị ka ugboro iri abụọ
Onye nwere ike inyere m aka na nke ahụ ma ọ bụ na m ga-eweghachite ya ekele
Ọ bụghị. dijo
Enwere m obi abụọ na LG G4 ma ọ bụ S6 ,,, ma ọ bụ na-ada na sony ,, ma na-agụ nke a, m na-atụfu nnọọ ọnụ na ndepụta m. Enwere m LG G2 na ndozi, na-enweghị ebe ọ bụla, mmetụ ahụ malitere ịda, ihe oyiyi ahụ "maa jijiji"! ọ dị ka telivishọn ochie ... ihe dị ka ụbọchị 4 gara aga ọ nọ na ọrụ ọrụ aka (n'ime akwụkwọ ikike n'ihi na ọ nwere naanị ọnwa 8 iji ya na ọ bụghị otu kụrụ n'ihi na m na-elekọta ya nke ọma karịa ihe ọ bụla). Lọ ọrụ ekwentị ahụ gwara m na ha na-atụ anya akụkụ ahụ mapụtara na na ụbọchị 5 ha ga-ebunye m ya, n'agbanyeghị na ha enwetaghị akụkụ ahụ mapụtara, ha ga-enye m ego ịhọrọ ọzọ…. M tụkwasịrị LG obi nke ukwuu, G2 bụ ezigbo ọnụ ahịa mana enwere m nkụda mmụọ ịchọta ọtụtụ okwu na-adịghị mma gbasara mpempe akwụkwọ mmetụ ya. Achọghị m ịgọnahụ ya ọzọ ...
Zaghachi Noe S.
Enwere m LG G4 H-815 na mgbe ọnwa atọ gachara enyo enyo ahụ, ọ malitegharịrị ọtụtụ oge ma ọ dị ọkụ, ezitere m ya LG, ha eweghachitere m ya otu ihe ahụ. Ezigala m ya ọzọ na LG gwara m na ọ hapụrụ ọrụ teknụzụ na Jenụwarị 5 mana ọ bịabeghị, onye ozi ahụ amaghị ihe ọ bụla (m bi na Zaragoza). Onwere onye maara ebe m nwere ike ime mkpesa, ma ọ bụ ikike ndị anyị nwere dị ka ndị na-azụ ahịa?
Ezigbo egwu, otu ihe mere LG G4, Budata APP. IHE AKW THEKWỌ AKA. MGBE M Kpọrọ oku karịa 40 nkeji APP na-arụ ọrụ na oge M Kpọrọ oku na akụrụngwa Igwe ihe ngosi oyi. Iwepụ batrị ahụ nwere ike ijikwa ya mana ọ dịghị mma ugbu a ọ na-eweghachi ma na-enwe ọkụ. M KWURU YA N’ỌR THE ECLỌ ỌREC N’ECLỌ N’ ANDLỌ
Enweela m G4 maka ụbọchị abụọ ma ọ na-aga nke ọma, enweghị mkpesa, tupu m nwee G2 na enweghị ihe m ga-ekwu ma ... Obi dị m ụtọ na ha abụọ ... di m nwere G3 zuru oke .. Ugbu a okwu na-ekpo ọkụ nke m chere nke bụ ihe ziri ezi na ekwentị niile ... ọ bụ ezie na g4 anaghị eme ya ...
Ola enwerem sony m4 na aga m agbanwe ya n'ihi na o di njo, azutara m lg g4 nke anabatabeghi ma gi ana-acho m, mmadu na eme nke oma ...
MGBE G4 Enwere M Nsogbu na Oge ụfọdụ (AKA) M NA-EME IHE MERE MADRE AKWREKWỌ MAGHCC MARA M, M wepụ ya ma meghere ha na-arịọghị ha, nke bụ, OGFỌDOG ISM IS ỌH IS NJỌ.
LG g4 m na-adị oke ọkụ. Ọ bụla ngwọta biko
Zaghachi joseluis Cervantes
Ndewo onye ọ bụla. Enweela m Lg G4 maka izu abụọ ma enwere m obi ụtọ ruo ... Na taa m tinyere enyo iko na ya ma "okpukpu abụọ" kwụsịrị ịrụ ọrụ iji gbanye ya.
Mgbe ahụ. Ọ nọwo na-ewepu ihuenyo na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè ọzọ.
Ihuenyo zụtara site na nnukwu ọnụ ala ebay. Agwaara m onwe m na ọ bụghị iko iko niile ka radieshon gafere.
Mmechi ， ọnụ ala dị oke ọnụ.
Enwere m LG G4 Telcel na-ewe ugboro atọ na TELCEL gbanwere m ya n'ihi na ọ na-ekpo oke ọkụ…. ma na-aga n'ihu ime otú ahụ. Azụkwana ngwa a.
Lg G3 N'abalị mgbe ị pịa n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ọ naghị aza. Emere m ule ahụ n'ezie na enweghị mpempe akwụkwọ dị n'akụkụ aka nri. Euro 370 nke ekwentị mkpanaaka agbajiri mgbe ọnwa 14 gachara. Ka anyị lee ihe ha gwara m na mmanụma, ma ọ bụ LG ma ọ bụ m maara ... kedụ ihe mmechuihu ...
Enwere m lg g3 eti na ọnwa gara aga mmetụ ahụ arụghị ọrụ, emere m nrụpụta siri ike na enweghị ihe ọ bụla, naanị bọtịnụ mpụga na-arụ ọrụ. Azụrụ m aka site na mercadolibre n'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụ na, mgbe m gbanwere ya ọ ka bụ otu ahụ, agbalịrị m ihe mmetụ ahụ na lg g3 ọzọ nke nne m ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke, yabụ ugbu a ejighị m n'aka ma ọ bụrụ bụ nsogbu ngwaike nke motherboard, ma ọ bụ naanị nje ma ọ bụ nsogbu femụwe. Ihe na-atọ ọchị bụ na ọ bụrụ na m jikọọ culular na eriri USB ejikọrọ na kọmputa ma ọ bụ onye na-agbanwe ọkụ, mmetụ ihuenyo nke ekwentị na-aza ma na-ezighi ezi, mana opekata mpe ọ na-aga, na-ezighi ezi mana ọ na-aga ... achọpụtara m na ha rere m Chinese lg g3, nke ravians me more da, nke a nwere naanị ọkara afọ eji.
Enwekwara m stere ụgbọala lg nke na-egwu vidiyo, ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ nke ọma site n'otu oge gaa na nke ọzọ, na-agbanyụ naanị mgbe ọ dị ya.
Agbanyeghị. LG dị nzuzu, ma ọ bụ ndị China na-edepụtaghachi ya.
Ndewo, g4 m enweghị ebe ọkara bụ ihuenyo ihuenyo, amaghị m ihe m ga - eme, ọ bụ ọnwa asatọ
Nkechi S. dijo
Ndewo, enwere m LG G4 ọnwa anọ gara aga, ihe niile dị mma ruo mgbe ntụpọ sitere na windo gara aga malitere ịpụta na ogwe ngosi. Enyemaka
Zaghachi Maria S.
Ezigbo crybabies .. lg g2 bụ otu n'ime ekwentị kacha mma anaghị enye m nsogbu kpo oku ma ọ bụ reboots na batrị dịgidere ruo ụbọchị 2 site na iji data ma ọ bụ wifi na-arụ ọrụ mgbe niile, m nyekwara ọtụtụ ụlọ omenala na ihe ọ bụla ... .. ugbu a nwere lg g4 na ezigbo igwe nwekwara nsogbu na batrị ahụ were 6 awa mana na-achọpụta m ọ nọrọ 14 awa 30 nkeji na data ụbọchị niile. Na-ewere foto.video wdg ... na-enweghị mgbagha lg g4 ekwentị kacha mma ... onye nhazi ahụ nwere ike ịbelata ọnụọgụ karịa galax s6 ... mana ọ gaghị ahụ anya mgbe ị nwalere ma ọnụ ... lg g4 the best ama
Azụrụ m lg4 stylu na ụbọchị nke abụọ olu anaghị arụ ọrụ na elekere atọ ọ kwụziri, na nke atọ na ihuenyo ahụ adịghị mma, ọkara ọkara amalitela ma na-aga n'ihu na nsogbu ugbu a echere m na ịlaghachi ọ naghị arụ ọrụ Ọfọn, ọ na-ewute lg3, na-aga n'ihu na telivishọn ndị ekwe ntị na ..
Zaghachi Cristian Castro
Daniel Toledo Castro onye nhazi ihe oyiyi dijo
Enwere m G4 H815P Series 6 Akpụkpọ anụ Black na ọ na-eme nnukwu. Batrị ahụ were naanị awa iri na anọ; Agbanyeghị, emelitere m ngwa ngwa ahụ na V14G ma ana m eme ọfụma ugbu a ọ gbachiri na njedebe nke ụbọchị. Igwe dị egwu! Na foto o nweghi onye ndorodoro ya! Manualkpụrụ akwụkwọ ntuziaka ya bụ ihe niile!
Zaghachi Daniel Toledo Castro
Ntinye nke sel m anaghị arụ ọrụ na ihu ma ọ bụ ihe ọ bụrụ na m nwere cel na veetical m ga-etinye ya n'ụzọ ziri ezi iji zipu ndị mjs dị ka ebe ahụ? Cannye pụrụ inyere m aka
Enwere m g4 maka ọnwa ole na ole na 6.0 na booon mgbe chi bọrọ, m kwụpụ ya na chaja ma ọ ga-ewe m oge iji teta n'ụra abụọ ma ọ bụ na azụ bọtịnụ amaghị m ihe kpatara ya mana mgbe m nwesịrị ezigbo makina ma eleghị anya mmadụ nwere ike inyere m aka na ọdịda a n'agbanyeghị na ọ naghị ewute m nke ukwuu
Nnọọ. Enwere m g4. Na ọnwa 9 ọ na-emepe ngwa ahụ, kpọọ, dee naanị ya. Ọ dị ka ọnye nwere mmụọ. Ọ na-eme ya ugboro ole na ole n'ụbọchị, ọkachasị n'ụtụtụ ka batrị na-agba elu. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Ruvi .o dijo
Enwere m nsogbu, LG G4 m mebiri ihuenyo ma ọ naghị amata mkpịsị aka m, ha ga-enye m azịza
Galaxy Tab E, obere mbadamba mbadamba si Samsung
Xiaomi nwere ike ime ibe ya, nke mbu n’ime uzo Redmi